I-Delphi, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeDelphi
Bukela ividiyo mayelana neDelphi
UDelphi wayenegama elidumile kakhulu lasendulo Greece futhi yathathwa njengesikhungo somhlaba. Hlola i-Delphi, indawo yamagugu omhlaba njengoba yaba nethonya elihle ezweni lakudala, njengoba kufakazelwa yisikhumbuzo esicebile esakhiwa lapho iningi lamadolobha amakhulu amaGrikhi asendulo, sibonisa ubumbano lwawo oluyisisekelo lwamaGrikhi.
Indawo ibuye ivikelwe njengendawo yobuhle bemvelo obungajwayelekile, futhi imibono evela kuyo nayo ivikelwe. Azikho izakhiwo zezimboni okufanele zibonwe zivela eDelphi ngaphandle kwemigwaqo nezindawo zokuhlala zokwakhiwa kwendabuko noma izintambo zamandla kagesi eziphezulu zihanjiswa ngendlela ukuze zingabonakali endaweni yangcwele.
UDelphi waba indawo yethempeli elikhulu kuPhoebus Apollo, kanye neMidlalo yePythian kanye ne-prehistoric oracle.
Umlando weDelphi uqala nge-prehistory nasezinganekwaneni zamaGrikhi asendulo. Okutholwa kuqala endaweni yaseDelphi, usuku lwesikhathi seNeolithic (4000 BC). Amathempeli amatshe okuqala ka-Apollo no-Athena akhiwa ngasekupheleni kwekhulu lesikhombisa B.C.E.
Ukusuka ezikhathini zasendulo uDelphi wayeyindawo yokukhulekelwa kukaGaia unkulunkulukazi ongumama ohlangene nokuzala.
Ngekhulu lesithupha BC, lapho le ngcwele yenziwe inkululeko, yandisa indawo yayo nethonya lezombusazwe nezenkolo kulo lonke elaseGrisi, yahlela kabusha Imidlalo yePythian, imidlalo yesibili ebaluleke kakhulu eGreece ngemuva kwama-Olimpiki, obekubanjwa njalo ngeminyaka emine.
Phakathi kwekhulu lesithupha nelesine leminyaka B.C.E., i-Delphic oracle, eyayithathwa njengethembekile kunayo yonke, yayisiphezulu kakhulu. Yalethwa yiPythia, ubupristi, futhi yahunyushwa abapristi baka-Apollo. Amadolobha, ababusi nabantu abajwayelekile babonisana nale ndawo, bezwakalisa ukubonga kwabo ngezipho ezinkulu futhi besakaza udumo emhlabeni jikelele.
Indawo leyo bekucatshangwa ukuthi ibikhona kusukela ekuqaleni kwesikhathi. Ngezikhathi zamaRoma, le ndawo engcwele yathandwa ngamanye amakhosi futhi yaphangwa abanye kodwa lokhu akuzange kumise futhi kumane kusabalalisa amahlebezi ayo ngokwengeziwe.
Ukuchazwa okuningiliziwe kwezakhiwo kanye nemidwebo engaphezulu kwamakhulu amathathu kube nomthelela omkhulu ekwakhiweni kabusha kwale ndawo. Umbusi waseByzantine uTheodosius wagcina ngokuqothula isisetshenziswa futhi amaSlav abhubhisa i-precinct e-394 BC. Ngokuqala kobuKristu, uDelphi waba umbono we-episcopal, kepha washiywa ngekhulu lesithupha lesikhombisa AD. Ngokushesha nje, ngekhulu lesikhombisa AD, isigodi esisha, iKastri, sakhula emanxiweni endawo yasendulo, saheha ezikhathini zanamuhla abahambi abaningana abanentshisekelo yezikhathi zakudala.
Ukucwaninga kwezinto zakudala eDelphi kwaqala e1860. I-Great Excavation ithole izinsalela ezinhle, kufaka nemibhalo engaba izinkulungwane ezintathu ebaluleke kakhulu olwazini lwethu lwempilo yomphakathi yasendulo Greece.
Ukusuka ekungeneni kwesiza, ukuqhubeka ngomthambeka cishe kuya ethempelini uqobo, kukhona inani elikhulu lezithombe ezibaziweyo, nezinye izinto eziningi ezibizwa ngokuthi amagugu. Lokhu kwakhiwe yizifunda eziningi zedolobha lamaGrikhi ukukhumbula ukunqoba nokubonga i-oracle ngeseluleko sakhe okucatshangelwa ukuthi saba nomthelela kulokho kunqoba. Lezi zakhiwo zaziphethe iminikelo ecebile enikezwe u-Apollo bekungokweshumi kokuphangwa kwempi.
Ukuhlola i-Delphi kulula njengoba kutholakala kalula ukusuka Athens njengohambo losuku, futhi kwesinye isikhathi luhlanganiswa nezindawo zemidlalo zasebusika ezitholakala eMount Parnassus, kanye namabhishi nezindawo zemidlalo zasehlobo ogwini oluseduze.